Tenga matatu mu3 Magetsi otomatiki Mukaka Frother - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
3 mu1 Magetsi Otomatiki Mukaka Frother
Ngarava Dzinobva Porendi Ukireni CN Saudhi Arabhiya SPEINI Russian Federation Furanzi
Vachena / Poland / EU Vachena / Ukraine / EU Yakachena / CN / EU Vachena / Saudi Arabia / EU Muchena / SPAIN / UK Vachena / Russian Federation / UK Muchena / Ukraine / UK Vachena / France / UK Vachena / Saudi Arabia / UK Muchena / Poland / UK Vachena / Russian Federation / AU Yakachena / CN / UK Vachena / France / AU Muchena / SPAIN / AU Muchena / Poland / AU Muchena / Ukraine / AU Muchena / CN / AU Vachena / Saudi Arabia / AU Vachena / Russian Federation / EU Vachena / France / EU Muchena / SPAIN / EU Vachena / SPAIN / US Vachena / Russian Federation / US Vachena / Ukraine / US Vachena / France / US Vachena / Saudi Arabia / US Vachena / Poland / US Vachena / CN / US
3 mu1 Magetsi otomatiki Mukaka Frother - Chena / CN / EU yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Chitupa: CE, GS
Model Nhamba: DM065w
Mwero wekutenderera (RPM): 2800
Simba (W): <750W
Rudzi Resimba: Magetsi
Kukosha kwefuro: 130ml
Kureba Kwetambo: 1m
Chigadzirwa Dhizaini: 17 x 12 x 20 cm
Kupisa / Kutonhorera Mukaka Kunopisa Magetsi Mukaka Frother inokupa iwe mbiri sarudzo yemukaka kupisa. Kunyangwe iwe uchifarira inopisa inopisa furo mukaka kana inotonhora silky mukaka, munogona mese kuva nazvo. DEVISIB otomatiki mukaka frother - sarudzo yakanakira iwe.
Mukaka unogona kudziya uye kupisa kusvika 60 ± 5 ℃ (131 ℉ ~ 149 ℉) kana uchipisa mukaka, inova ndiyo yakakwana tembiricha yekunwa. Kupisa-kupisa kuchaparadza mukaka zvinovaka muviri.
Iyi mukaka frother yakagadzirirwa froth mukaka wemukaka. Izvo mapuroteni uye zvemukati zvemukati ndizvo zvinobvumidza mukaka wako kufema. Asina-mukaka wemukaka wakasimwa-wakasikwa mhando inogadzirwa ichave isingawirirane uye inogona kusiyana. Kana iwe ukaomerera pane isiri-mukaka wemukaka, ini ndinokurudzira Barista -style isiri yemukaka mukaka iyo inofanirwa kubatsira nemukaka froth yemiti yemukaka. Froth mhedzisiro haigone kuvimbiswa kune chero imwe isiri-barista -style mukaka wemichero.
Chinhu chakakosha mukuzadzisa furu yakanaka kushandisa mukaka mutsva uye unotonhora. Mukaka unofanirwa kutonhora uye kutsva. Shandisa mukaka uyo wakatorwa zvakananga kubva mufiriji uye wotanga kufefetera nekukasira. Iyo inotonhora mukaka, zvirinani. Isu tinokurudzira kuti tembiricha yemukaka yakatenderedza 4 ~ 6 ℃ (39.2 ℉ ~ 42.8 ℉).
Usasiye mukaka pakaunda mushure mekushandisa nekuti izvi zvinogona kukanganisa kutsva kwemukaka. Nguva dzose isa mukaka zvakare mufiriji kana wapedza kushandisa.
Usambofa wakazadza mukaka pamusoro peiyo MAX Chikamu. Ita shuwa yekushandisa yakakodzera whisk. Tarisa chinowirirana chinoratidza mwero. MAX Zadza Mutsara (130ml / 4.4Oz) usati watora mukaka. MAX Zadza Line (300ml / 10.1Oz) usati wapisa mukaka.
Chenesa chirongo pakarepo mushure mekushandisa kwega kwega. Flush uye uchenese madziro uchishandisa inodziya sipo mvura, wobva waoma neyakaoma nyoro jira.
1 x Mukaka Frother
1 x Kupenga whisk
1 x Kukurudzira whisk
Furo rakagadzirwa zvakanaka.
Kurumidza Kuendesa (mazuva manomwe). Ndatenda. Zvese zvinoshanda sezvazvinofanira. Kurudzira.
Chigadzirwa chakanaka. Kutumira nekukurumidza. Ndinokurudzira.
Yatove frother yechipiri ini kukoka .. Nguva yamai! Chigadzirwa chigadzirwa! Runako! Kutumira nekukurumidza mukati mevhiki nevhiki zvaive zvakanaka! Saka ndatenda
Kutumira kwakanyanya kukurumidza! Mukaka waishamisa. Zvirokwazvo kurudzira chitoro Dhirivhari inokurumidza uye yakanaka mhando. Ini ndinokurudzira capuchator zvechokwadi!